I-Bopet, ifilimu ye-pet, isiseko sokuprinta seFilimu-I-Shuyang Genzon Novel Equipment Co, Ltd.
Ngamaxesha onke ngombono wenkonzo elungileyo, esemgangathweni yemveliso, ecinga emva kwenkonzo yentengiso, setha igama elihle kwimarike kushishino lweefilimu.
Yasekwa ngo-2017, iSuyyang Genzon Novel Equipment Co, Ltd. (ekubhekiselwe kuyo njenge- “GENZON Novel Equipment”) iphantsi kolawulo lweGENZON GROUP nayo ethathela kuyo ulawulo kunye nokusebenza kwayo.
Izixhobo zeNovel yeNo yeGenzon lushishino lwezobugcisa oluphezulu olukhethekileyo kwicandelo lemathiriyeli ye-polymer, ukudibanisa imveliso ye-R & D, ukuvelisa kunye nokuthengisa kuluhlu olubanzi lweemveliso kunye neendidi ezigqibeleleyo. Ifilimu ye-polyester ngokuzimeleyo eyenziwe kwaye yaveliswa yinkampani inokusetyenziswa ngokubanzi kwimimandla eyahlukeneyo yemveliso enjenge-aluminium plating, ukuprintwa, ukukhuselwa kwekhadi, i-bronzing, ukukhutshwa, igolide kunye nesilivere wire, ifilimu yekink, ukungena kwamanzi, njl. Kwixesha elizayo, inkampani Izicwangciso zokwandisa usetyenziso lwezinto ezinokuphinda zisebenze kwakhona.Ngoku ikhoyo, inkampani ine-18 lamawaka eetoni zemigca yokuveliswa kwemigca, i-4 ye-donier yaseJamani ngokuthe ngqo inyibilikisa imigca yokuvelisa ifilimu eyi-biaxial kunye nomgca woku-1 wovavanyo lwasekhaya. Inomnini wokuvelisa kunye neziseko zeR & D eJiangsu nakwezinye iindawo.
Kwixesha elizayo, i-Genzon Novel Equipment iya kusekelwa kumbono wamazwe aphesheya ukwakha uphawu lwesiTshayina kwaye izame ukuba yinkokeli kushishino lwezixhobo ezitsha ngokudibanisa izibonelelo esele zikho, ukomeleza ubuchule obuzimeleyo, kunye nokuphuhlisa izinto ezicocekileyo kunye nezixhobo zokusingqongileyo.
UCWANGCISO LWEZOBUGCISA NOPHUHLISO
Iqela eliphambili le-R & D, likhokelwa ngugqirha ofunde eMelika, limiswe kwi-Silicon Valley ukufumana ubuchwephesha behlabathi obuphambili Isiseko sovavanyo sefilimu esikwinqanaba eliphezulu sinceda ubuchule bethu bokulungelelanisa kwimveliso, ekufundeni nasekuphandeni ubuchwephesha obonakalayo bonobumba, kwihlabathi liphela bathathe inxaxheba kwezobugcisa bezinto ezizimeleyo nezobuchwephetsha
Sineqela elinobuchule, elinamava kunye nelisebenza ngokufanelekileyo lokukhuthaza ukukhula okuzinzileyo kunye nokuzinzileyo kwezinto ze-NoZON yeNeo kwizinto zophando lobuchwepheshe kunye nophuhliso, ukulawulwa kwemveliso, ulawulo lomgangatho, ulawulo lokuthengisa kunye nokusebenza kweshishini kunye nolawulo.
Imveliso yonyaka yeetoni ezingama-180,000 kumzi-mveliso we-110,000m2
Imigca emine yokuhombisa imiboniso bhanyabhanya ye-Dornir kunye nomgca wokuvavanywa okwenziwe ekhaya
Iworkshop phantsi kolawulo oluqhelekileyo lwe-6S
Iimveliso zecingo zegolide
iimveliso zokufakelwa kombane
ukhuseleko lwesixhobo sombane
Gxila kwi-GENZON Novel Equipment, ziqhelanise neendlela zeshishini, kwaye uhlale unolwazi lwezinto ze-Novel ze-GENZON ezikujikelezileyo.
Ukususela kwizixhobo ze-Novel Genzon ukugqibile ukudityaniswa kunye nokudityaniswa ngokutsha kwee-asethi kwaye uqaphele ukuqalwa kokuqalisa komgca wokuvelisa, kwelinye icala ...
Thelekisa inkqubo yokuvelisa ...
Okwangoku, kukho iindlela ezi-2 ezahlukeneyo zemveliso kwimveliso ye-BOPET, enye yinkqubo yokwenza izinto, enye iyanyibilika ngokuthe ngqo. Ngaphambi kuka-2013, intengiso yayihlala ikakhulu isekwe kwinkqubo yokulungisa, whi ...
Imeko yangoku kunye nethemba o ...
I-PX yeyona nto ibalulekileyo ingasetyenziswayo kwimveliso yonke ye-polyester, Utshintsho lomzi mveliso wayo inegalelo elibalulekileyo kushishino oluthile. ukungena ngokusesikweni ...
29Ngo-2020 / Jun
Izinto ze-Novel ze-Genzon,
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Septemba, umsitho wengingqi we-2019 I-Suqian Green Industry Expo yabanjelwa ukuvulwa kweziko le-Suqian Exhibition. Umxholo wale Green Fair "luhlaza, ukudibanisa kunye nokutsiba ...